Gmail Account Recovery လုပ်နည်း /2Step ကျော်နည်း / Gmail Account ပတ်စ်ဝါးဖောက်နည်း | Myanmar Black Hacking
16 Gmail Account Recovery လုပ်နည်း /2Step ကျော်နည်း / Gmail Account ပတ်စ်ဝါးဖောက်နည်း
ဒီနည်းလမ်းကို ရေးသားထားတဲ့ မူရင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Baby Punk Ghost ဆီက ခွင့်ပြုချက်အရင်တောင်းခံထားခဲ့ပြီးမှ Public ချပေးလိုက်တာပါလို့ကြိုပြောထားပါရစေ..
ဒီစာအုပ်ထဲက နည်းလမ်းတွေHာ တကယ်အလုပ်ဖြစ်သလား မဖြစ်ဖူးလားဆိုတာထက် ဖုန်းနည်းပညာ/ဘလော့ဂါးထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဇော်သွင် (နည်းပညာ Bla Bla... ) ဆိုသူတစ်ယောက်ရဲ့ Gmail အကောင့်နဲ့Blog တစ်ခုဖောက်ခံခဲ့ရဖူးတယ်ဆိုတာ သတင်းကြားမိကြမယ်ထင်ပါတယ် ..Hote ပါတယ် ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်သွားသူကတော့ တခြား Phishing / Keylogger စတဲ့နည်းတွေသုံးသွားတာမHoteပဲ ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ နည်းလမ်းပုံစံကဲ့သို့Recovery ပြန်လိုက်တဲ့နည်းကနေ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်သွားတဲ့နည်းက ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးလို့နီးစပ်ရာ (.....) မှ သိရပါတယ်............ ထားပါတော့ ( လိုရင်းရောက်တော့မှာမုတ်တော့ဖူး :p )
ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Email Account တစ်ခုကိုဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် သူ ငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့Email ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် Password မေ့သွားလို့ ပြန်ပြီး Recovery လုပ်ယူမယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းအတိုင်းပြုလုပ်သွားဖို့ လိုပါတယ် တစ်ချို့ တွေအတွက် သိပြီးသားဖြစ်နေနိုင်ပေမယ့် ဒီလို Recovery လုပ်နည်းကိုမသိသေးတဲ့ သူ တွေလဲ အများကြီးရှိနေတာပါ ဒါကြောင့် Email Password မေ့သွားလို့ ဖြစ်ဖြစ် Account Hacked လုပ်ခံရလို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနည်းလေးနဲ Recovery့လုပ်ကြည့်ပြီးမိမိအကောင့်ကိုပြန်လည် ရယူနိုင်ကြပါစေဗျာ။
#စကားချပ် - ဒီနည်းလမ်းလေးကို ကောင်းတဲ့ဖက်ကပဲ အသုံးချကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် :)
Download PDF ။ File Size - 912 KB
Link 1 ( From DropBox )
Link2( From ZippyShare )
Labels: Ebooks . Hacking Tutorials
​မှော်​ဘီသား​လေး (နည်းပညာ◠‿◠) said...
Sep 29, 2015, 7:35:00 AM
maung khaing said...
Sep 29, 2015, 7:37:00 AM
Sep 29, 2015, 6:50:00 PM
ဘယ်​လို downရမှန်​ကို မသိ့လို့ပါ
Oct 8, 2015, 11:11:00 AM
ဆရာ ကျွန်တော့ Gmail ကို တယောက်ယောက် attack လုပ်နေတယ်လို့ ထင်တယ် ခင်မျ အောက်က ပုံတွေအတိုင်းဖြစ်နေဲပြီး မေးလ် ပို့တာ မေးလိပ်စာ မှန်ရဲ့သားနဲ့ အောက်က ပုံစံအတိုင် ဖြစ်နေတယ်ခင်မျာ
ကျွန်တော်ပို့တဲ့ မေးလိပ်စာ တခုပြီးတခုဘဲ ပြီးတော့ လိုင်းအတူတူဘဲကို သူများ မေးလ်က အဆင်ပြေပြီး ကျွန်တော မေးလ်က အမြဲတမ်း connecting load ဖြစ်လိုက် တက်လိုက် ဖြစ်နေပါတယ် ခင် မျ
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain gmail.com by gmail-smtp-in.l.google.com. [2607:f8b0:400d:c08::1b].
452 4.2.2 https://support.google.com/mail/answer/6558 y190si4731qkd.243 - gsmtp
X-Received: by 10.55.144.6 with SMTP id s6mr43408893qkd.118.1471428753253;
Wed, 17 Aug 2016 03:12:33 -0700 (PDT)
Received: by 10.200.56.129 with HTTP; Wed, 17 Aug 2016 03:12:32 -0700 (PDT)
From: Ko Zay
Date: Wed, 17 Aug 2016 16:42:32 +0630
Subject: Import License for Farm Machine Parts & Feed mill Machine Parts
To: Thanawan Taprig , Swe Mon ,
NEON LIGHT , Yin Min Htike
Cc: jame ruangsak , Kyaw Than Tint ,
"rhythm.lay" , Eithet San ,
Nang Aye Mon Hseng , leh leh win ,
"han.n N" , Pink Title , zayphyokyaw@myanmarcp.com
Please look up the attached import license .
Reference PI number : PI5907-0003 (YIL8 16_17 2208)
: INV.5907004 (W MIC YIL1 16_17 0171 )
my gmail address is zayarkarr@gmail.com
Thanks and waiting for your Comment Sayar
Aug 19, 2016, 7:51:00 PM
Aug 20, 2016, 12:53:00 AM
Sep 19, 2016, 5:46:00 AM
Jan 3, 2017, 2:01:00 AM
Mar 16, 2017, 7:07:00 AM
Mar 16, 2017, 12:20:00 PM
Mr.Yan Lay said...
thank bro ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုသုံးရတာလဲ ဘာအတွက်လဲဗျ
Jun 10, 2018, 8:21:00 AM
Sep 13, 2018, 12:22:00 PM